travelparis Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: travelparis
နေအိမ် > travelparis
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ပဲရစ်အကြောင်းကိုကိုချစ်ဖို့ဤမျှလောက်ရှိပါတယ်. သင်သည်အဘယ်မှာပင်စတင်ကြဘူး, မှန်သော? စိတ်ထဲမှကြွလာသောပထမဦးဆုံးအရာ Eiffel မျှော်စင်နှင့် Louvre တူသောအကြီးဆိုဒ်များဖြစ်ပါသည်. သို့သော်အဘယ်ကြောင့်လည်းတမြို့လုံး၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသောကျောက်မျက်ရှာဖွေတွေ့ရှိမဟုတ်? စတင်ကြပါစို့…